Okutholakele Okubalulekile kokuthi Abathengisi Bakuthuthukisa Kanjani Okuqukethwe Komphakathi | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 9, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Iseluleko se-Software uhlanganyele ne-Adobe ukudala ifayela le- Ucwaningo lokuqala lokuSebenza Kokuqukethwe Komphakathi. Imiphumela ebalulekile ibandakanya:
Abathengisi abaningi (amaphesenti angama-84) bavame ukuthumela okungenani amanethiwekhi amathathu wezokuxhumana, namaphesenti angama-70 athumela okungenani kanye ngosuku.
Abamakethi bavamise ukukhomba ukusetshenziswa kokuqukethwe okubukwayo, ama-hashtag namagama abasebenzisi njengezindlela ezibalulekile zokwenza okuqukethwe kokuxhumana nabantu.
Abangaphezu kwesigamu (amaphesenti angama-57) basebenzisa amathuluzi esoftware ukuphatha ukuthumela, futhi laba abaphendulile babhekana nobunzima obuncane bokusebenzisa okuqukethwe kwabo komphakathi.
Ucwaningo lwethu luphakamisa ukuthi iningi labakhangisi lithumela kaningi eziteshini zenhlalo okungenani ezintathu noma ezine futhi lizama ukusebenzisa amaqhinga athile ukukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo futhi (ngokufanele) likhiqize imikhondo yekhwalithi. Abamakethi abaningi (amaphesenti angama-70) bathe bathumela okuqukethwe ezinkundleni zokuxhumana okungenani kanye ngosuku, ngamaphesenti ayi-19 athi athumela ngaphezu kokuphindwe kathathu nsuku zonke. Kepha umthombo wethu, ULiz Strauss, ikholelwa ukuthi iningi labo lithumela ngaphandle kwenhloso ecacile futhi ngaphandle kokuqonda kwangempela kokuthi yini engafezwa kunoma yisiphi isiteshi esithile senhlalo. UJay Ivey weSeluleko SeSoftware (lapho ungakwazi khona qhathanisa ukubuyekezwa kwesoftware ye-CRM yomphakathi)
Futhi imininingwane ingaxhasa leso simangalo. Isibonelo, uLiz uthi kubuyela emuva ukuthi abathengisi abaningi bakubeke phambili okuqukethwe okubukwayo kunokubeka phambili ukuhlonza nokuqondiswa kwezithameli ezithile. Njengoba ebeka, uma ungazi ukuthi okuqukethwe kwakho kwakhelwe obani, ngeke ubathumele izinhlobo ezifanele zamasignali. Futhi lokhu kuphakamisa ukungabi nokuqonda okukhathazayo ngemigomo eyisisekelo yamasu adingekayo ukufeza imiphumela yangempela, elinganisekayo ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana. Nakhu ukuphazamiseka kokutholakele:
Imvamisa Yezindaba Zokuqukethwe Komphakathi
Ukuhlelwa kokuthunyelwe kokuqukethwe kwezindaba zomphakathi
Izinjongo Zokuhlola Okuqukethwe Komphakathi
Inombolo Yokuqukethwe Yezindaba Zomphakathi
Usayizi Womphenduli Wokuqukethwe Komphakathi
Izihloko Zomphenduli Wokuqukethwe Komphakathi
Amaqhinga Wocwaningo Lokuqukethwe Komphakathi
Isikhathi Sokuqukethwe Kwabezindaba Zomphakathi
Ukusetshenziswa Kwamathuluzi Okuqukethwe Komphakathi
Ubunzima bokusebenziseka kokuqukethwe kwezindaba zomphakathi
Ubunzima bokusebenziseka kokuqukethwe kwezindaba zomphakathi ngamathuluzi
Funda kabanzi ku okuthunyelwe okugcwele okuvela kuJay kubhulogi le-B2B Marketing Mentor yeSoftware Advice.
Tags: adobejay iveyliz straussinhlolovo yomakethiisifundo sokumakethainhlolovo yezokumakethaokuqukethwe komphakathiukusebenziseka kokuqukethwe komphakathiinhlolovo yezimakethe zomphakathiinhlolovo yokwenza okuqukethwe kwezokuxhumanainhlolovo yezokuxhumanaiseluleko se-software